Wafdigii uu hoggaminyay R/wasaaraha oo dalka Imaaraadka ku booqday Bukaannadii ku dhaawacmay qaraxii hotelka Centeral – Radio Muqdisho
R/wasaaraha xukuunadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdigii uu hoggaaminayay oo shalay dalka dib ugu soo laabtay ayaa intii ay ku sugnaayeen dalka Imaaraadka Carabta waxa ay booqdeen bukaannada dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay hotelka Centeral ee magaalada Muqdisho, kuwaasoo daryeel caafimaad loogu qaaday dalkaasi UAE.
R/wasaaraha oo ay wehliyeen wasiirrada arrimaha dibadda, warfaafinta hiddaha iyo dalxiiska, Gaashaandhigga. Diinta iyo Owqaafta, Dastuurka iyo wasiiru dowlaha xafiiska R/wasaaraha ayaa intii ay joogeen dalka Imaaraadka Carabta oo ay marti qaad rasmi ah ka heleen waxa ay la kulmeen mas’uuliyiin sar sare oo ka tirsan dalkaasi.
Labada dhinac ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo iskaashiga ka dhaxeeya labada dowladood iyo sidii dowladda Imaaraadku u kordhin laheyd mashaariicda horumarineed ee dalka.
Dhinaca kale R/wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa booqday cisbitaal ay ku jiraan bukaanno ku dhawaacmay qaraxii ka dhacay hotelka Centeral ee magaalada Muqdisho, kuwaasoo saryeel caafimaad loogu qaaday dalkaasi.
Wasiirka warfaafinta hiddaha iyo dalxiiska mudane Maxamed Cabdi Xayir “Maareeye” oo ka mid ahaa wafdiga R/wasaaraha ayaa sheegay in xaaladda bukaannadaasi ay soo hagaageeyso, dhawaana ay dib ugu laaban doonaan dalkooda iyagoo bed qaba.
Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska “mudane “Maareeye”ayaa dhinaca kale intii uu joogay dalkaasi waxa uu kulamo la qaatay madaxda golaha warbaahinta Qaranka dalkaasi, isagoo kala hadlay sare u qaadidda xiriirka warbaahineed ee labada dal, iyo sidii dowladda Imaaraadku gacan uga geysan laheyd horumarinta warbaahinta dalkeenna Soomaaliya.